Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa fatahaad kasameeyey wabiga shabeele – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa sheegaya in Wabiga Shabeelle uu ku fatahay Degmada Mahadaay, xilli muddooyinkii dambe ay jirtay cabsi la xiriirta fatahaad uu wabiga geysto.
Guddoomiyaha Degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax oo la hadlay Idaacada Goobjoog ayaa sheegay in Wabiga uu ku soo Fatahay Degmada, islamarkaana biyaha ay soo aadeen dhanka Laamiga weyn ee degmadaasi.
Waxa uu sheegay in 2-kun oo qoys ay guryahoodii ka barakaceen, ka dib markii biyo badan ay buux dhaafiyeen halkii ay deganaayeen dadkaasi.
“Wabiga aad ayuu degmada ugu soo fatahay, Laba Kun oo qoys guryahooda ayeey ka barakaceen, waxaa buuxiyay guryahii Biyo, waxaa isku furmay bulaacadihii iyo biyahii kasoo fatahay Wabiga” ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Mahadaay ee Shabellaha Dhexe ayaa sheegay in ka maamul ahaan aanay xilligaan wax tabar ah u ahayn wax u qabashada shacabka guryahooda ka barakacay, ayna ka daaleen baaqyo kala duwan oo dowladda Federaalka u direen waa sida uu hadalka u dhigaye.
Digniino kala duwan ayaa laga bixinaayay waayahan dambe fatahaado ay geystaan Wabiyada Jubba iyo Shabeelle ee mara dalka Somaliya, waxaana tani ay ku soo aadeysa, xilli laga cabsi qabo fatahaado hor leh oo wabiyada ay sameeyaan.
Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa u qaylo dhaaminaya Hay’adaha gar gaarka si gurmad loola gaaro dadka saameynta ay ku yeelatay fatahaada Wabiga.